Ukudala indawo entsha yeemveliso zangaphandle
Ngomhla we-Meyi ka-2020, i-Besttone co., Ltd iseke isebe elitsha- isebe leemveliso zokhuselo lwangaphandle. Ukuqala uphando kunye nokuphuhlisa iimveliso zokhuselo lwangaphandle. Iminyaka engama-20 edlulileyo, i-Besttone ikhule yaya kuba yinkampani enkulu ebanzi neqolileyo yengubo yophando kunye ...
Ukuchaphazeleka yimeko yehlabathi yesifo esitsha secoronavirus, umzi-mveliso uqala kwimaski yophando kunye nemiyalelo yemaski yemveliso ngokungxamisekileyo, ukwenza eyethu imizamo kuthintelo lobhubhane wehlabathi. Ukusukela ukuphela kwe-2019, i-China yenzeke ngobhubhane omtsha we-coronavirus (obizwa ngokuba yi-COVID-2019), othi ...
Besttone eyakhe ifektri yakhiwe yaze yafakwa kwimveliso
Ngo-2017, iFreetone yeyakhe eyakhiweyo yaza yafakwa kwimveliso. Umzi-mveliso unabasebenzi abangaphezu kwama-500, kubandakanya abaphathi abasi-7, amagcisa angama-30 kunye nabasebenzi bokuthunga abagqwesileyo abangama-380 kwimigca yemveliso. Ikwanazo neeworkshops zemveliso ezininzi ezizimeleyo, ezinje ngokwenza iipateni, ukusika, ukuthunga, ukugqiba ...